कोरोनामुक्त भएपछि पनि असर पछिसम्म देखिरहने – Health Post Nepal
कोरोनामुक्त भएपछि पनि असर पछिसम्म देखिरहने
२०७७ असोज ७ गते १७:१८
कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भए पनि संक्रमणमुक्त भएकाहरुमा पछिसम्म समस्या देखिरहने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा कोरोना मुक्त भएका बयस्कहरुमा पनि पछिसम्म स्वास्थ्य समस्या देखिने पाइएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना अपडेट कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परिषद्का चिकित्सक डा. प्रदीप ज्ञवालीले कोरोनामुक्त भइसकेपछि पनि लामो समय थकान महशुस हुने, शरीर पूर्ण रुपमा फुर्तिलो नहुने देखिएको बताएका छन्।
परिषद्ले कोरोना संक्रमणपछि देशभरीका ५७७ जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएकाहरुमा अध्ययन गरिएको थियो। ‘हामीले सातै प्रदेशका संक्रमणमुक्त भएकाहरुमा अध्ययन गरेका थियौं। अध्ययनअनुसार संक्रमणमुक्त भएपछि पनि त्यसको असर पछिसम्म देखिने पाइएको छ,’ उनले भने।
टेलिफोनबाट गरिएको उक्त अध्ययनमा १८ वर्षभन्दा माथिका संक्रमण मुक्तहरु सहभागी थिए। जसमा संख्यात्मक अध्ययनमा ५५२ जना र २५ जनामा गुणात्मक अध्ययन गरिएको थियो।
‘अध्ययनमा सहभागीले दिएको जानकारी अनुसार कोरोनामुक्त भएपछि पनि युवा तथा बयस्कमा लामो समय बिरामी बनाउने, असहजता उत्पन्न हुनेजस्ता लक्षणहरु देखिएका छन्’, उनले भने। जसमध्ये ३५ प्रतिशतमा निको भएको दुई÷तीन सातासम्म पनि रुघासँगै थकानको महशुस हुने पाइएको छ।
उनले अध्ययनका क्रममा अधिकांश सहभागीले कोरोनाबाट मुक्त भइसकेको लामो समयसम्म पनि काममा मन नलाग्ने, शरीर फुर्तिलो नहुनेजस्ता लक्षणहरु पाइएका छन्। हालसम्म संक्रमितहरुमध्ये करिब ७१ प्रतिशत निको भएका छन्।
९९ प्रतिशत संक्रमितले यात्रा गरेका थिए
अध्ययनका क्रममा परिषद्ले अधिकांश यात्रामार्फत नै संक्रमित भएको पाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरुमा नै संक्रमण बढी देखिएको छ। डा. ज्ञवालीले अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९९ प्रतिशतले यात्रा गरेको पाइएको जानकारी दिए।
जसमा, ६९.१ प्रतिशतले राष्ट्रिय अर्थात आन्तरिक यात्रा गरेका थिए, भने २९.९ प्रतिशत विदेशबाट आएकाहरु थिए।
८९ प्रतिशतमा सामान्य लक्षण
यस्तै, कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांशमा सामान्य लक्षणमात्रै देखा परेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८९ प्रतिशतमा सामान्य लक्षण देखिएका छन्। १० प्रतिशमा भने, केही बढी समस्या देखिएको पाइएको छ।
जसमा सामान्य ज्वरो, रुघाखोकी, चिसो महशुस हुने तथा दैनिक काममा अहसज महशुस भएको पाइएको छ। उनले युवा तथा बयस्कमा पनि लामो समयसम्म बिरामी बनाउन सक्ने देखिएको बताए। स्वास्थ्यकर्मीहरु, नर्स, स्वयंसेवीका लगायतमा पोस्ट ट्रामेस्टिक सिन्ट्रम पाइएको बताए।
७० जना दीर्घरोगी
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ७० जना दीर्घरोगी पाइएको डा. ज्ञवालीले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए। उनीहरुमा दम, श्वासप्रश्वास समस्या, मिर्गौलाको समस्या, मुटु र केहीमा एचआईभी संक्रमण पनि भएको पाइएको छ। यस्ता दीर्घरोगीहरुलाई पनि कोरोनाले केही समस्या पारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धुप्रपान तथा मद्यपान १० प्रतिशतले घट्यो
परिषद्ले गरेको अध्ययन अनुसार कोरोना संक्रमणपछि नेपालमा धुम्रपान तथा मद्यपान १० प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। कोरोना अघिको स्थिति र कोरोनापछिको स्थितिलाई तुलना गर्दा १० प्रतिशत बढी धुम्रपान मद्यपानको सेवन घटेको परिषद्को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, पनि निको भइसकेपछि खानेहरु पनि बढ्दै गएका कारण यो संख्या पछि बढ्नसक्ने परिषद्ले जनाएको छ। जसका लागि सरकारलाई धुम्रपान मद्यपान नियन्त्रण गर्न सुझाव पनि दिएको छ।
१५ प्रतिशतमा मानसिक तनाव
अध्ययनमा सहभागीमध्ये करिब १५ प्रतिशतमा मानसिक तनाव देखिएको छ। बारम्बार एउटै कुरा सोध्ने गर्नाले उनीहरुमा दिक्क लाग्ने तथा मनमा अनावश्यक विचारहरु आउने देखिएको छ। जसमा करिब ७.७ प्रतिशतले आफू र अरुप्रति नै नकारात्मक सोँच्ने गरेको पाइएको छ।
लामो समय लकडाउन र कोरोना संक्रमणबाट जित्न सकस झेलेका कारण पनि उनीहरुमा नकारात्मकता हावी भएको प्रतिवेदनमा बताएको छ। कोरोना संक्रमणको कालमा उनीहरुले परिवार र आफन्तबाट स्नेहसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
८४ प्रतिशतलाई सामाजिक भेदभावको महशुस
कोरोनाबाट संक्रमित भएकाहरुले संक्रमणको अवस्थामा अधिकांशले सामाजिक भेदभावको महशुस गरेका छन्। परिवार, आफन्त तथा समाजबाट हुने व्यवहार अप्रत्यासित रुपमा बदलिएको बताएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार यस्तो महशुस हुने ८४.३ प्रतिशत रहेका छन्। राम्रो रेखदेख नहुनुका साथै कोरोनामुक्त भएपछि पनि खुलेर सबैसामु आउन नसकिएको उनीहरुले बताएका छन्।
यस्तै, युट्युव, फेसबुकलगायत अनलाइनमा आउने भ्रामक समाचारका कारण पनि आफूहरुमा मानसिक तनाव बढेको संक्रमणमुक्त भएकाहरुको गुनासो छ।
Tags: काेराेना संक्रमण